Haiti na-arịọ maka ndị agha US ka ha chekwaa akụrụngwa nke mba
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Haiti » Haiti na-arịọ maka ndị agha US ka ha chekwaa akụrụngwa nke mba
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Haiti • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Haiti na-arịọ ka ndị agha US chebe akụrụngwa mba
A rịọrọ arịrịọ a mgbe onye ode akwụkwọ nke United States Tony Blinken na Onye isi ala Joe Biden n'onwe ya "kwere nkwa na ha ga-enyere Haiti aka" maka mbibi nke onye isi ala na mbido izu a.
Onye ọnụ na-ekwuchitere Pentagon jụrụ ịza ajụjụ na arịrịọ ahụ.
US gọọmenti etiti mmadụ si FBI na Ngalaba n'ala nna Nche a ga-eziga Haitian isi obodo aka "ozugbo enwere ike."
"Ndị na-eyi ọha egwu n'obodo" nwere ike iji esemokwu ugbu a wee mee mwakpo ọzọ.
Mịnịsta na-ahụ maka ntuli aka nke Haiti Mathias Pierre kwuru na Haiti rịọrọ United States ka ha ziga ndị agha US ka ha nyere aka mee ka mba ahụ kwụsie ike ma chekwaa akụrụngwa ndị dị oke mkpa dịka mmanụ, ọdụ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ mmiri n'etiti ọgba aghara na-esochi igbu nke Onye isi ala Jovenel Moise.
Dị ka onye ozi ahụ si kwuo, a rịọrọ arịrịọ ahụ mgbe Secretary nke State nke US Tony Blinken na Onye isi ala Joe Biden n'onwe ya "kwere nkwa inyere Haiti aka" na mbuso agha nke onye isi ala na mbido izu a. Ọ dọrọ aka ná ntị na "ndị na-eyi ọha egwu n'obodo ukwu" nwere ike iji esemokwu dị ugbu a wee mee mwakpo ọzọ.
Jụrụ ka o dokwuo anya ma Pentagon ọ ga-eziga mba ndị agwaetiti Caribbean nkwado ọ bụla nke ndị agha, onye na-ekwuchitere ngalaba jụrụ ịza ajụjụ.
Ọ bụ ezie na ọnụ na-ekwuchitere US State Department Jalina Porter kwukwara n'oge mkparịta ụka nke taa na ọ nweghị ike ikwenye na ụdị arịrịọ a, ode akwụkwọ akụkọ White House Jen Psaki kwuru na a ga-eziga ndị ọrụ gọọmentị etiti si FBI na Ngalaba nke Homeland Security na Haitian isi obodo iji nye aka “ozugbo enwere ike.”
Otu nke ndị oji egbe gbagburu Moise n’ụlọ ya nke dị nso na Port-au-Prince n’isi ụtụtụ Wenesde; nwunye ya merụrụ nnukwu ahụ ma buru ya gaa ụlọ ọgwụ na Miami, Florida.
Ọ bụ ezie na nkọwa ole na ole gbasara ndị gburu ọchụ ahụ apụtala, ndị ọrụ Haitian boro ebubo na ọ dịkarịa ala mmadụ 28 nọ n'azụ nkata ahụ, gụnyere ụmụ amaala Colombia 26 na ndị Haiti-America abụọ. Onye isi ndị uwe ojii mba ahụ bụ Leon Charles kwupụtara na Tọzdee na anwụchiri ndị Kolombia iri na ise na Amerịka abụọ ahụ, ebe mmadụ atọ ndị ọzọ gburu ndị uwe ojii. N'oge ahụ, o kwuru na mmadụ asatọ ndị ọzọ na-enyo enyo ka nọ na nnukwu.
Dika egwu nke ogbaaghara riri nne, Haiti ka no na onodu “onodu nnọchibido” nke ndi ochichi, site n’egwuchi, imechi oke ala na njikwa mgbasa ozi siri ike etinyere na mba, ebe etinyere ndi agha ndi uwe ojii n’uzo. Emergencybọchị mberede 15 ga-adịgide ruo mgbe ọnwa a gachara.